Sunifiram (DM235) ntụ ntụ (314728-85-3) hplc ma98% | AASraw Nootropics
/ ngwaahịa / Nootropics ntụ ntụ / Sunifiram (DM235) ntụ ntụ
SKU: 314728-85-3. Category: Nootropics ntụ ntụ
AASraw nwere ikikere na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Sunifiram (DM235) (314728-85-3), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Sunifiram (DM235) ntụ ntụ bụ isi ihe
aha: Sunifiram (DM235) ntụ ntụ
Molekụla Formula: C15H13F2NO2S
Ọbara arọ: 309.33
Sunifiram (DM235) ntụ ntụ na ụbụrụ ụbụrụ
Sunifiram ntụ ntụ, DM235 ntụ ntụ nwere aha ahia dika BisfluoroModafinil, Flmodafinil.
DM235 ntụ ntụ Usage
DM235 ntụ ntụ bụ akwụkwọ edemede, nke nwere ike nke na-enweghị ihe ọkpụkpụ na AMPAkine-dị ka onyinye na-emetụta ụbụrụ na ụdị anụmanụ.
Sunifiram uzuzu bụ piperazine nke nwere ihe ndị yiri ka piracetam. E mepụtara Piracetam maka ọrịa ndị na-arịa ọrịa neurodegenerative dị ka ọrịa Alzheimer, na a maara Sunifiram ntụ ntụ iji mee ka arụ ọrụ na-arụ ọrụ ụfọdụ n'ime ụfọdụ omume. Na nyocha nke ntanetị, Sunifiram ntụ ntụ anaghị egosi ọbụbụenyi maka ọtụtụ ndị natara ma ọ bụ ọwa (ọ dịghị njikọ na 1μM maka serotoninergic, dopaminergic, muscarinic, nicotinic, adrenergic, glutamatergic, histaminergic, opioid, ma ọ bụ GABAergic receptors), ma na-akwalite ntọhapụ nke acetylcholine site na rat cerebral cortex, ma eleghị anya site na ngbanwe usoro AMPA nke nzaghachi.
Sunifiram uzuzu na - egbochi ịmalite ime ihe site na scopolamine, mgbe nchịkwa na nchịkwa, na nrugharị ugwo na nkwụsịtụ nke 0.01 mg / kg po. Ihe mmetụta ahụ nke Sunifiram ntụ ntụ dị ka nke a na - eji ọgwụ ọjọọ eme ihe dịka piracetam (30 mg / kg ip), aniracetam (100 mg / kg po) na rolipram (30 mg / kg po), ma jiri 1,000 - 10,000 ugboro dị elu karịa.
Ịdọ aka ná ntị na mmetụta DM235 ntụ ntụ
Sunifiram ntụ ntụ (DM-235) bụ ọgwụ na-emepụta piperazine bụ nke nwere mmetụta mgbochi amnesiac n'ọmụmụ anụmanụ na nnukwu ike karịa piracetam. Sunifiram raw ntụ ntụ bụ ngwugwu nkịtị nke unifiram. Dabere na nchọpụta vitro na anụmanụ, ọ na-egosi na ntụ ọka Sunifiram na-eme site n'iji AMPA-activation activation.
Sunifiram raw ntụ ntụ na-arụ ọrụ site na ịmepụta ndị na-anabata AMPA; ya bụ, ndị na-anabata ya maka mgbasaozi nke transnaptic nnyefe n'ime usoro nhụjuanya dị n'etiti. Usoro ya na-emekwa ka phosphorylation nke AMPAR na NMDAR mụbaa site na mmalite protein kinase, nke nke a na-eme ka ọnọdụ dị ogologo oge dị elu - ya bụ, mmelite na ntinye aka n'etiti eriri abụọ nke sitere na mkpali nke oge.
Mmechi kinase nke na-emetụta Sunifiram ntụ ntụ na-eme ka ntụpọ nke ụbụrụ dị mma. Ọzọkwa, Sunifiram raw ntụ ntụ na-arụ ọrụ na corbex cerebral nke ihe ọmụmụ ụmụ anụmanụ site n'inyere aka na ntọhapụ nke acetylcholine, ngwongwo ahụ nke na-arụ ọrụ dịka onye na-ahụ maka ntanetị n'ọtụtụ ìgwè dị iche iche. Usoro ndị a na-arụ ọrụ na-enyere Sunifiram ntụ ntụ aka iji mgbochi amnesiac eme ihe.
Sunifiram ntụ ntụ na-enwe ike igbochi ndị amịnem nke nicotinic mecamylamine kpatara, GABAB agonist baclofen, α2 agonist clonidine na onye na-akwado NBQX na-akwado AMPA na ule nkwụsị ọsọ.
Na oke Morris test test mmiri, nchịkwa nke scopolamine na - egbochi nkwụsị nke mgbapụ na ịchọta ma na-ejigide nyocha. Sunifiram raw powder, nke 20 min nyere tupu ọzụzụ ọzụzụ ọ bụla kwa ụbọchị, nwere ike igbochi nkwụsị nchedo scopolamine na 0.1 mg / kg ip
Sunifiram ntụpụ na-emepụta ọtụtụ ihe ndị na-eme ka ọ ghara ịdị irè ma ọ bụrụ na enweghị mgbanwe ọ bụla anya na omume ọjọọ nke ụmụ oke ma ọ bụ oke, na 0.1 mg / kg ip, Sunifiram ntụ ntụ na-ebelata oge nke hypnosis nke pentobarbital na-ebugharị n'ebughị ụzọ gbanwere oge mgbatị nke hypnosis. Ọzọkwa, ụmụ oke na-emeso ya na Sunifiram raw ntụ ntụ na-ejigide njigide igwe na ule rotarod. Mkpụrụ motọ nke ụmụ oke, nke Animex na-enyocha, yana nchọpụta nyocha, nyocha site na nyocha ụlọ, nọgidere na-abụkarị mgbe Sunifiram nchịkwa ntụ.
Sunifiram raw powder modulates cholinergic nnyefe na cerebral cortex nke na-ebugharị na oke. Dị ka e gosipụtara site na microdialysis, Sunifiram ntụ ntụ nwere ike ịmalite ịhapụ ACh na ọgwụ 0.01 mg / kg, nke nwere ike karịa Unifiram.
Ngosipụta nke mkpụrụ ndụ hippocampal rat na 100 μM NMDA na-eme ka ọnụ ọgụgụ nke [3H] NE (48) dị elu. Mmetụta nke NMDA bụ nke 100 μM kynurenic acid (KYNA) gbochie. Mgbakwunye nke concentrations nanomolar nke Sunifiram raw ntụ ntụ na-agbagha KYNA antagonism. Mmetụta nke Sunifiram ntụ ntụ bụ ịdabere (EC50 0.1 μM) na ọ fọrọ nke nta ka ọ zuo na 1 μM.
Enwere ike itinye aka na ndị na-anabata AMPA site na iji NBQX na-anabata onye AMPA. Mgbe a na-etinye ya na 5 μM, NBQX na-egbochi nhazi 3H] nke AMPA (100 μM), ma ọ bụghị nkwụsịtụ tritium nke 100 μM NMDA na-etinye na listi hippocampal rat (48). NBQX, na-arụ ọrụ na ya n'onwe ya, na-eme ka mgbanwe nke Sunifiram rwa kpuchie nke KYNA antagonism nke ntọhapụ tritium nke NMDA, nke na-atụ aro itinye aka na ndị na-anabata AMPA na mmetụta Sunifiram ntụ.
N'ụzọ na-adọrọ mmasị, n'okpuru ọnọdụ ndị dị ala, Sunifiram nchịkọta ntụ ntụ na-eme ka PKCa (Ser-657) na ọrụ Src (Tyr-416) na-arụ ọrụ na-enwe ụdị mgbịrịgba-mgbịrịgba dị ka nke LTP, na -ekere na 10 nM. Akwukwo 657-ClKN nabatara nmalite nke phosphorylation nke PKCa (Ser-416) na Src (Tyr-7) nke Sunifiram kpuchiri. Nlekọta LTP site na Sunifiram raw ntụ ntụ bụ nke PP2, onye na-arụ ọrụ Src na-egbochi.
N'ikpeazụ, mgbe a na-eji nnukwu glycine (300 lM) mee ka a gụọ ya, ọgwụgwọ Sunifiram na-eme ka ọ ghara imepụta LTP na mpaghara CA1.
N'akọrọ ọnụ, ihe àmà ndị a dị n'elu na-atụ aro na Sunifiram ntụ ntụ na-eme ka saịtị NMDAR glycine na-arụ ọrụ na-eme ka PKCa kwalite site na Src kinase. Mmezi nke ọrụ PKCa na-ebute ike nke LTP hippocampal site na ịmalite ọrụ CaMKII.
DM235 ntụ ntụ Marketing
Esi zụta DM235 ntụ ntụ: zụta Sunifiram ntụ ntụ si AASraw
Sunifiram (DM235) Ntụziaka ntụ ntụ ntụ ntụ:
Zụrụ ọgwụ ọjọọ Drug Sunifiram n'igwe
1 nyochaa maka Sunifiram (DM235) ntụ ntụ
Sunifiram (DM235) ntụ ntụ bụ ihe ọmụma